၂၀၁၇ မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံး SUV အသစ်အနေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ Toyota C-HR! – AutoMyanmar
၂၀၁၇ မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံး SUV အသစ်အနေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ Toyota C-HR!
Toyota အနေနဲ့ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလကနေ ဒီဇင်ဘာလအထိရရှိခဲ့တဲ့ C-HR (Couple High-Rider) model ရဲ့ ရောင်းအားရလဒ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကမှကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota အနေနဲ့ C-HR model ကို ၂၀၁၇ အတွင်းမှာပဲ ၁၁၇၂၉၉ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တာပါ။ တစ်နှစ်အတွင်း တစ်သိန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တော်တော်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ဟာ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ တခြား automaker တွေ SUV (Sport Utility Vehicle) ကိုရောင်းချနိုင်မှုထက်များပြားနေတာကြောင့် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး SUV အဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။
C-HR model ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလကပဲဖြစ်ပါတယ်။ SUV အနေနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းရော၊ အရည်အသွေးပိုင်းရော ကို Toyota ကတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ထားတာပါ။ ၂၀၁၇ သြဂုတ်မှာတော့ C-HR model အတွက်မတူညီတဲ့ အရောင်နှစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလမှာလည်း ကားရဲ့ဘေးကမီးနှစ်ဖက်ကို upgrade လုပ်ထားတဲ့ Edition တစ်ခုကိုထပ်မံပေါင်းထည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဖန်တီးမှု၊ ကြိုးစားမှု ရဲ့ရလဒ်ပါပဲ။ ??
From the @Toyota newsroom today – Toyota C-HR leads the pack as the top-selling new SUV in 2017 https://t.co/mrZtBl45xj pic.twitter.com/NtzZj4QjfL
— Max Schulze (@acarrscarstar) January 11, 2018